Hologram emere n'ụlọ: otu esi eme ihe nnọchi anya eserese a | Akụrụngwa n'efu
Hologram a na-eme n'ụlọ: esi mee ihe ngosi ndị a
N'ezie ị hụwo ya hologram na fim dị iche iche ọdịnihu, dị ka Star Wars, ebe ndị mmadụ nwere ike ịkọwapụta onwe ha site na iji holograph ndị a iji kwurịta okwu. Ọfọn, ugbu a ị nwekwara ike ịmepụta hologram gị nke ụlọ gị n'ụzọ dị mfe, na-enweghị sistemụ ọkaibe nke naanị ụfọdụ ga-enweta.
Ke ibuotikọ emi ị ga-eme mara nkọwa ndị ọzọ ihe a hologramụ bụ, yana kedukwa nhọrọ iji mepụta hologra gị eji aka gị rụọ ụlọ, ebe ị nwere ọtụtụ nhọrọ, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ya dị ka a ga - asị na ịchọrọ ihe a rụpụtara ugbu a ma dị njikere iji ... Na mgbakwunye, ịnwere ike itinye ya n'ọtụtụ ebumnuche, maka ihe ọchị na iji mee ihe na ebe agụmakwụkwọ iji gosipụta atụmatụ anatomical, ihe, wdg.
1 Kedu ihe bụ hologram?
2 Otu esi emepụta hologram arụrụ n'ụlọ
2.1 Zụrụ oru ngo maka smartphone
2.2 Zụta ihe ngosi maka hologram
2.3 Mepụta ngwa hologram gị nke aka gị
Kedu ihe bụ hologram?
Un hologram, ma ọ bụ holography, bụ usoro dị elu nke mejupụtara ịmepụta ihe oyiyi 3D dabere na iji ọkụ. Maka nke a, enwere ike iji usoro dị iche iche jiri usoro ihe eji eji ọkụ na ihe ọkụ na-enye ohere ịkọwapụta onyonyo na ọbụlagodi na enwere ike ịmegharị.
Mmalite nke usoro a na Hungary, chepụtara site na physics Dennis Gabor na 1948. Maka nke a ọ ga-anata Nobel Nrite na Physics na 1971. Agbanyeghị, ha ka dị oke hologram oge ochie. Ọ ga-abụ rue mgbe e mesịrị, na 1963, mgbe Emmett Leith na Juris Upatnieks, na US, na Yuri Denisyuk si Soviet Union, mgbe enyere hologram akụkụ atọ akọwapụtara nke ọma.
Ugbu a, enweela ọganihu dị ukwuu, ma enwere teknụzụ ndị ọzọ na-enyekwa ezigbo nsonaazụ na-ekwe nkwa, ọkachasị maka itinye ha n'ọrụ na ngalaba dịka eziokwu dịwanye elu. Ngwa ya nwere ike ịdị iche iche, site na iji ya na ngalaba agụmakwụkwọ, ọbụlagodi maka ihe ngosi, wdg.
O doro anya, hologram emere n'ụlọ na ị nwere ike ịmepụta ga-adị ntakịrị karịa, mana ọ ka dịkwa mma ...
Otu esi emepụta hologram arụrụ n'ụlọ
I nweghi uzo ozo iji mepụta hologram ụlọ gịma ọ bụ, ma ọtụtụ. N’ebe a ị nwere nhọrọ ndị na-adọrọ mmasị nke anaghị adị oke ọnụ. Nwere ike ịhọrọ nke kachasị mma maka mkpa gị ...
Echefula na n'ime nke atọ ọ bụla ị ga-agbanyụ ọkụ n'ime ụlọ iji nwee ike ịhụ ihe oyiyi ahụ nke ọma ...
Zụrụ oru ngo maka smartphone
por erughị than 10 can nwere ike ịzụta otu n'ime ndị a na amazon ama oru ngo. Na ya ị ga-enwe ike ịnọchite ọtụtụ igwe hologram 3D site na ihuenyo mkpanaka n'onwe ya. Nsonaazụ bụ ihe osise 3D mara mma nke yiri ka ọ na-ese n'ime ihe ngosi ahụ na ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka.
Ọ dị mfe iji, na achọghị ụdị nrụnye ọ bụla, nhazi ma obu nzuko. Naanị tinye ihe ngosi na ama gị wee bido hologram ụlọ gị site na iji ọtụtụ vidiyo ma ọ bụ ihe ị ga-ahụ na web, dịka na nyiwe dị ka YouTube.
Zụta ihe ngosi maka hologram
Ọzọ ọzọ dịtụ ọzọ ọkachamara ọzọ na nwetụrụ mma utịp, na mgbakwunye na nke na-amụba ibu hologram, bụ inweta a hologram projector na Amazon. Ngwaọrụ ndị a na-efu ihe karịrị € 100, ma ọ bụrụ na ihe oyiyi ndị a masịrị gị, ọ bara uru iji ha ọbụna na gburugburu azụmahịa, maka ngosipụta ngwaahịa, mgbasa ozi, wdg.
Ihe nyocha a dabere na ụkpụrụ dị mkpa, ọ na-atụgharịkwa mgbe ọ na-ewepụta usoro ọkụ ọkụ. Ọzọkwa nwere WiFi Njikọta iji jikọọ na PC na-arụ ọrụ dị ka isi iyi, ma ọ bụ site na ibugo site na kaadị ebe nchekwa microSD ruo 16GB.
Mepụta ngwa hologram gị nke aka gị
Ọ bụ ma eleghị anya nhọrọ kachasị arụ ọrụ, mana ọ nwere nsonazụ ka njọ karịa ikpe ndị gara aga. Ihe ziri ezi nke a usoro bụ na ọ bụ dị ọnụ ala karịa ma na ị nwere ike ime ya n'onwe gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ aka. Iji mepụta usoro hologram nke aka gị, ị ga - achọ:
Isiike transperent plastic. Ọ nwere ike ịbụ mpempe akwụkwọ nke methacrylate doro anya ma ọ bụ plastik nke cas / DVD casing.
Cutter, ibelata plastic.
Mkpa, iji belata akwụkwọ a na-eji dị ka ụkpụrụ.
Onye na-achị achị, maka ịbịaru.
Teepu nrapado, iji nwee ike isonye na akụkụ nke plastik, ọ bụ ezie na ị nwekwara ike iji ụdị gluu ma ọ bụ nrapado ọ bụla.
Mpempe akwụkwọ nke oghere site na akwụkwọ ndetu, iji mee ka nhazi ahụ dị mfe.
Pensụl ma ọ bụ pen maka ịbịaru.
Ozugbo inwere ihe niile, ihe ọzọ ị ga-eme bụ inweta ka anyị mee ya dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo. Nke ahụ bụ, na-achịkọta usoro ndị a chịkọtara ga-abụ:
See ụdị trapezoid na mpempe akwụkwọ eserese. Obere akụkụ nwere ike ịbụ 2 cm, akụkụ 5.5 cm na isi 7 cm. Nwere ike ịdị iche nha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme obere ma ọ bụ obere obere ihe dị iche.
Ugbu a, bepụ trapezoid na mkpa iji dị ka usoro.
Sịnye mpempe akwụkwọ ahụ na plasti ma ọ bụ CD transperent ma were mma ahụ bara uru belata otu ụdị ahụ. Kpachara anya ka ị ghara ịkpụ mkpịsị aka gị na usoro ahụ.
Tinyegharịa usoro ahụ site na nzọụkwụ 3 iji nweta 4 trapezoids plastik hà nhata. Yabụ ị kwesịrị ị nweta plastic doro anya maka nke ahụ ...
Ugbu a, ị nwere ike ịmepụta ụdị pyramid na trapezoids anọ ahụ ma sonye n'akụkụ mpụta iji chekwaa ọnụ ọgụgụ ahụ. Nwere ike iji teepu ma ọ bụ gluu.
Ugbu a, na pyramid ahụ, ị ​​ga-enwe ụdị ihe yiri igwe nyocha nke m tinyere na mbụ. Na na-arụ ọrụ ọ ga-abụ otu:
Tinye pyramid a tụgharịrị na ihuenyo nke mbadamba ma ọ bụ mobile.
Kpọọ vidiyo nke hologram ị hụrụ na net ma ọ bụ na ị mere onwe gị.
Na-enwe hologram ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » Hologram a na-eme n'ụlọ: esi mee ihe ngosi ndị a
Renode: gini bu ihe owuwu a na gini mere I ji eche?